Ukuphepha Emhlabeni Weziteshi ze-Omni
ULwesihlanu, May 2, 2014 ULwesihlanu, May 16, 2014 UKelsey Cox
I-Google inqume ukuthi ngosuku olulodwa, abathengi abangama-90% basebenzisa izikrini eziningi ukuhlangabezana nezidingo zabo eziku-inthanethi njengokubhanga, ukuyothenga, kanye nokubhuka futhi balindele ukuthi idatha yabo izohlala iphephile njengoba besuka endaweni yesikhulumi beya endaweni yesikhulumi. Ngokweneliseka kwamakhasimende njengokuhamba phambili, ukuvikeleka nokuvikelwa kwedatha kungawela ngemifantu. Ngokusho kweForrester, izinkampani ezingama-25% zibhekane nokwephulwa okukhulu ezinyangeni eziyi-12 ezedlule. E-US kuphela ngo-2013, izindleko ezijwayelekile zokwephulwa kwedatha kwakungu- $ 5.4 wezigidi.
Ku-infographic engezansi, Ubunikazi bePing isibonisa ukuthi ukuziphatha kwabathengi nokulindelwe kushintshe kanjani, umthelela kubuchwepheshe bebhizinisi, kanye nendima ebalulekile edlalwa ukuphepha uma kukhulunywa ngokuletha isipiliyoni sokugcina samakhasimende. Landela amathiphu abo ukuqinisekisa ukuthi idatha yamakhasimende akho ingahlala iphephile futhi ivikelekile.
Tags: e-commerceokudayisaezokuhweba ngekhompyuthainfographicisiteshi se-omniomnichannelping ungubanitekutsengisanokuvikeleka